Malỳ - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Malý)
I Malỳ dia firenena ao Afrika Andrefana, tsy manana morontsiraka, izay manana velaran-tany mirefy 1 240 192 km². Ny ampahany be amin’ ny tanin’ i Malỳ dia ao amin’ ny lohasahan’ ny ony Niger. I Bamako no renivohiny.
Mizara telo ny vohon’ ny tany ao Malỳ: ny faritra sahariana karankaina izay tsy dia ahitana zavamaniry firy; ny faritra saheliana somary maina izay ahitana hivoka anirian-kazo madinika; ary faritra anjakan’ ny hivoka anirian-kazo lehibe. Firenena manana toetany mafana sy maina i Malỳ ka matetika ianjadian’ ny haintany.
Foko maro no mandrafitra ny vahoaka maliana, ka ny Mandinga no maro anisa indrindra (40 %). Ny finoana silamo no be mpanaraka indrindra (90 %n’ ny mponina). Ny tapany atsimon’ i Malỳ no onenan’ ny ankamaroan’ ny mponina.
Ny ankamaroan’ ny mponina dia mpamboly, nefa ny habetsahan’ ny vokatra (katsaka, vary, ampembambazaha, voanjo, fary, landihazo, sns) dia miankina amin’ ny fitarihan-drano sy ny fiakaran’ ny ony Niger sy ny renirano misakelika aminy. Ny landihazo no iankinan’ ny taozava-baventy izay manondrana ny vokatra avy amin’ izany. Manana harenan an-kibon’ ny tany i Malỳ, ka anisan’ ireo firenena voalohany mpitrandraka volamena aty Afrika. Ny fiteny frantsay no fiteny ôfisialin’ i Malỳ.
Sarin-tanin' i Malỳ
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Malỳ&oldid=1040807"
Dernière modification le 3 Desambra 2021, à 15:15
Voaova farany tamin'ny 3 Desambra 2021 amin'ny 15:15 ity pejy ity.